Al-Shabaab oo maanta weerar ku qaaday goob ciidan oo ku taalla Muqdisho. – Radio Daljir
Al-Shabaab oo maanta weerar ku qaaday goob ciidan oo ku taalla Muqdisho.
Muqdisho, Oct, 29 – Ciidamada Ururka Al-shabaab ayaa maanta weerar xooggan ku qaaday fariisin ay fadhiyeen ciidamada Amisom iyo dawladda Federaalka oo ku taalla Wadada Warshadaha ee magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ka dhacay dagaal muddo socday.
Dad ka agdhawaa goobta dagaalka ayaa Radio Daljir u sheegay in Shabaabku ay hubka culus iyo qoryaha darardoorriga u dhaca ku weerareen goobtaasi lana maqlayey hubka ay labada dhinac is dhaafsanayaan, waxaana jira warar sheegaya in rag isasoo miidaamiyay ay xerada ciidamada gudaha u galeen oo ay halkaasi isku qarxiyeen, walaw aysan jirin warar rasmi oo arrintaasi caddaynaya.
Afhayeen u hadlay Shabaabka ayaa sheegay inay khasaare lixaad leh gaarsiiyeen ciidamada dawladda iyo kuwa Amisom, balse dawladdu wax war ah arrintaasi kama soo saarin. Ilaa iyo hadana ma cadda khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay.
Mid ka mid saraakiisha ciidamada dawladda Federaalka oo diiday in magaciisa la xigto ayaa Radio Daljir u sheegay in Shabaabku ay weerar culus ku soo qaadeen goobtaasi, ayna iska difaaceen, balse sarkaalkaasi waa uu diiday inuu bixiyo wax faahfaahin ah oo intaasi dheer.